Soo Iibso Qaylo-dhaanta Ka-hortagga Qaylada Nalalka Stereo Gaming Headset ee PC Gamer oo leh MIC - Rar bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Dhibaatada ka horjeeda Dazzle Dazzle Lights Kulleejka Ciyaarta Stereo Gaariga PC Gamer leh MIC
$ 46.33 qiimaha joogtada ah
Color Casaan cad madow madow Madoow oranji
Shiinaha / Casaan cad Ruushka / Casaan cad Shiinaha / buluug madow Xiriirka Ruushka / buluug madow Shiinaha / oranji madow Xiriirka Ruushka / oranji madow
Anti-buuqa Dazz Lights Stereo Gaming Headset For PC Gamer with MIC - China / White red gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
function:Ciyaaraha Fiidiyaha, Loogu talagalay Internet Bar, Telefoon-gacmeedka Caadiga ah, makarafoon
Number Model: KASTA G2000
Dareenka:114 ± 3DB
Waqtiga suuqa: Jul-14
Saacadaha Kulanka: EACH G2000 Qalabka Ciyaaraha
Xiriirka madaxa: USB + 3.5mm stereo
Dhererka cabirka: Qiyaas. 2.2m / 7.22ft
Color:Liinta iyo Madowga, Buluuga & Madowga, Caddaan iyo Casaan
Xidhmada: Xidhmada Tafaariiqda / Xidhmada Tafaariiqda
Isticmaal: Qalabka Ciyaaraha kombiyuutarka
Xidhiidhiyayaasha:2 * 3.5mm plug + usb
EACH G2000 waa nooc ka mid ah nooc madaxeedkii hore ee ciyaarta, kaasoo kuu keenaya maqal muuqaal ah, cadeyn cod, dareen cabsi naxdin leh, awood u leh ciyaaro kala duwan.
Waa suuf aad u jilicsan oo Dhegaha Dheer ka badan ayaa raaxo leh waqti dheer xiran, waana headphone weyn oo loogu talagalay ciyaar ciyaar!
Saxnaanta sare ee '50mm magnetic neodymium darawalka', waxay kuu keentaa muuqaalka codka muuqda, muuqaalka dhawaaqa, dareenka naxdinta codka, oo awood u leh ciyaaraha kala duwan.
Kalasoocidda dhawaaqa ee quruxda badan.
Qalabka dhagaha la gashado waxaa loo isticmaalaa shey maqaar u roon, iyo suuf dhego badan oo jilicsan oo dhego dheelitiran.
Nalalka iftiinka LED-ka waxaa loogu talagalay koobabka dhegta iyo makarafoonka, iyagoo muujinaya jawiga ciyaarta.
Xarig bir ah, guluubka waara wuxuu yareeyaa iska caabbinta dibedda; Xarkaha fiilada korontada ee Velcro, ka hortag khadka iskuxirka. Khadku waxaa ku qalabeysan mashiinka mugga wareegga, hal fure Mic ah, oo ku habboon in la isticmaalo.
Farshaxanka iyo muuqaalka qurxinta.
Kuleejka ciyaaraha xirfadeed ee doorashadaada.
Moodeel: EACH G2000
Dhexdhexaadiyaha darawalka: 50mm
Ka hortagga: 32Ohm
Dareenka: 114dB +/- 3dB
Heerka xawaaraha: 20-20KHz
Cabbirka cabbirka: 6.0 * 5.0mm
Dareenka micnaha: -34dB +/- 3dB
Maqnaanshaha Micnaha: 2.2kohm
Laydhka shaqeeya ee korantada: DC5V +/- 5%
Hada shaqeynaya: Hoosta 100mA
Kombiyuutarka Nalalka: USB (fiilo xiraha USB, iftiinka iftiinka wuxuu ku yaallaa, furfuran yahay, off) + 3.5mm stereo
Dhererka cabirka: Qiyaas ahaan. 2.2m / 7.22ft
Midabka: Liinta & Madowga / Buluuga & Madoow / Caddaan & Casaan
Cabbirka madax-weynaha: Qiyaastii. 21 * 11.5 * 21.5cm / 8.3 * 4.5 * 8.5in
1 * EACH G2000 Madaxweyaha
Dhagaha waaweyn! Si fiican u ciyaar! Gaarsiinta dhaqsaha badan Kiev wuxuu yimid maalmihii 12
Wax walba waa hagaagsan yihiin, si fiican ayey u shaqeysaa
ommgggg waa Amaziiinng 5 xiddigtaan bass-adaha tayada leh
makarafoon aad u fiican, codka waa nadiif, makarafoonka wali lama tijaabin.
Qiimaha sidan oo kale ah, dhawaqa kaliya waa bam + sidoo kale waa dhalaalayaa
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 60952.
dib u eegista 60952